Saraakiil Reer Galbeed ah oo shaaciyey laba xog oo xasaasi ah oo ay ogeyd Ikraan |
Saraakiil Reer Galbeed ah oo shaaciyey laba xog oo xasaasi ah oo ay ogeyd Ikraan
Muqdisho(GNN):-Warbaahinta Bloomberg ee Mareykanka, oo soo xiganeysa il-wareedyo reer galbeed iyo saraakiil ka tirsan QM, ayaa qortay warbixin ku saabsan xog ay haysay Ikraan Tahliil Faarax, oo ay suurta-gal tahay in loo dilay iyo in dowladda Soomaaliya ay isku dayeyso inay qariso xaqiiqda dhimashada Ikraan.
Waxaa gudaha Soomaaliya aad looga rumeysan yahay in dowladda ay qarineyso xaaladaha ku hareereysan dhimashada Ikraan, sida ay sheegeen saraakiil Reer Galbeed iyo taxliiliyeyaal la socday kiiskan, ayaa lagu yiri warbixinta Bloomberg.
Ikraan ayaa xog hoose ka heysay heshiis amni oo sanadii 2018 dhex-maray Eritrea, Ethiopia iyo Soomalaiya, heshiiskaas oo faah-faahintiisa ay saddexda dal doonayaan inay sir ahaato, sida ay sheegeen saddex sarkaal oo Reer Galbeed iyo QM ah oo ka shaqeeya Soomaaliya, kuwaas oo codsaday inaan magacyadooda la shaacin, sababo la xiriira inaan loo ogoleyn inay ka hadlaan qiimeynta sirdoonka.
Soomaaliya ayaa muddo ku tuhmeysay dowladda Eritrea inay taageerto kooxda Al-Shabaab, waxaana heshiiska uu yareeyey xiisaddii hay’adaha amniga labada dal, sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay Bloomberg.
Ilo-wareedyada la hadlay Bloomberg ayaa sidoo kale sheegay in heshiiska uu dhigayo in saraakiil sirdoon oo Eritrean ah ay saldhigyo ka sameystaan Soomaaliya iyo Ethiopia, taasi oo madaxweyne Isaias Afwerki siisay inuu saameyn ku yeesho gobolka. Eritrea ayaa taageereysay dagaalka uu ra’iisul wasaraaha Abiy Ahmed kula jiro mucaaradka Tigray ee waqooyiga dalkiisa.
Shaac ka qaadista nuxurka heshiiska iyo sababaha ka dambeeya dhimashada Ikraan, waxay horseedi karaan xiisad diblomaasiyadeed oo ka qaraxda Geeska Afrika, waxaa sidaas Bloomberg u sheegay Omar Mahmood oo ah khabiirka hay’adda xasaradaha adduunka ee International Crisis Group u qaabilsan Soomaaliya.
Ikraan oo tababar dhanka ammaanka internet-ka (cyber-security) kusoo qaadatay xarunta booliska Scotland Yard ee London, 2019, ayaa sidoo kale haysay xog ku saabsan qiyaastii 5,000 oo askari oo Soomaali ah oo loo diray Eritrea, si ay tababar ugu soo qaataan, sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha la hadlay Bloomberg.
Ikraan “waxay diyaar u aheyd inay kashifto” howlgalkan militari ee muranka dhaliyey, sida lagu sheegay warbixin ay bishii tagtay baahisay International Crisis Group.
Bloomberg oo la xiriirtay xafiisyada madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, kama aysan jawaabin su’aalo ku saabsan heshiiska saddex geesoodka ee Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia. Sidoo kale, wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel, iyo Billene Seymoum, oo ah gabar afhayeen u ah Abiy Ahmed ayaan jawaabin.
Qoyska Ikraan Tahliil iyo xildhibaano matala ayaa shalay sheegay in baaritaan lagu waday in Maxkamadda Ciidamada ay ku sameyso kiiskan uu socon waayey kadib markii uu is-hortaagay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo